Umkhankaso omusha wobugebengu bokweba imininingwane ebucayi nge-SMS ezenza ubunikazi be-Amazon | Izindaba zamagajethi
Umkhankaso omusha wobugebengu bokweba imininingwane ebucayi nge-SMS ezenza ubuwena be-Amazon
U-Ignacio Sala | | Amazon, Ukuphanga
Isikhathi esingaphezu konyaka, wonke amakhasi wewebhu afuna ukukhonjwa kwinjini yokusesha yakwaGoogle kufanele asebenzise umthetho olandelwayo we-https, umthetho olandelwayo wezokuphepha ohlukile ku-http yendabuko, isinikeza ukubethela kokuphela kokugcina kuyo yonke idatha ezithunyelwa kumaseva lapho kutholakala khona ikhasi lewebhu.
Lesi sinyathelo esenziwe yiGoogle, sokwengeza ukuphepha kwe-inthanethi, sengeze eqinisweni lokuthi zonke iziphequluli zisikhombisa umyalezo oyingozi lapho sivakashela iwebhusayithi ngefomethi ye-http, siphoqe abangani abavela ngaphandle ukuthi basebenzise amanye amasu ukuzama ukukhohlisa abasebenzisi abangaqaphile. Namuhla sikhuluma ngendlela entsha abayisebenzisayo umkhonyovu nge-SMS ezenza i-Amazon.
Umzamo wokukhwabanisa uqala lapho sithola i-SMS, okuthiwa ivela ku-Amazon, lapho asazisa khona ukuthi sibe ngabaphumelele ngenhlanhla ye-raffle i-Amazon ehlelile ukugubha usuku lwayo lokuzalwa futhi isimema ukuba sichofoze isixhumanisi ukuze siyithole isixhumanisi esingavikelekile se-http ngaphandle kwe-s njengoba ubona esithombeni ngenhla.
Ngokuchofoza kusixhumanisi, siboniswa ikhasi lewebhu eline-logo ye-Amazon, ukusebenzisa ama-https, nangomklamo ohluke kakhulu kunalowo onikezwa yi-giant search. Umbhalo waleso sixhumanisi usitshela ukuthi masonto onke bakhetha amakhasimende ayi-10 e-Amazon ngiyabonga ngokuthembela kwakho okubeka kumikhiqizo nezinsizakalo zakho nokusimema ukuba siphendule imibuzo emithathu ukubona ukuthi sinenhlanhla yini.
Ngokuphendula le mibuzo emithathu, usazisa ukuthi sibe ngabaphumelele ngenhlanhla ye-iPhone XS. Ukuze sikuthole, sicabange ukuthi singabasebenzisi be-Amazon noma kungelona iqiniso, kufanele sifake imininingwane ye-akhawunti yethu ye-Amazon khokha ama-euro ama-2 wezindleko zokuthumela.
Lapho usebenzisa iwebhu umthetho olandelwayo we-https, isiphequluli nganoma isiphi isikhathi izobona ukuthi kungenzeka ubugebengu bokweba imininingwane ebucayi, okuyikho okuyikho ngempela, ngakho-ke kuzosivumela ukuthi sifake idatha ngaphandle kwenkinga.
1 Cela imininingwane ye-akhawunti yethu ye-Amazon
2 Ukudlula ukuphepha kwesiphequluli
3 Akekho onikeza noma yini
Cela imininingwane ye-akhawunti yethu ye-Amazon
Lapho sifaka idatha yethu, elinye ikhasi lewebhu lizoboniswa lapho saziswa khona ukuthi ukuqinisekiswa kwenziwe ngempumelelo nokuthi ukuze sithole umkhiqizo, kufanele siqinisekise ubudala bethu (uma sineminyaka engaphezu kwengu-18 ubudala, ibhadi ), sisebenzisa ikhadi lethu lesikweletu. Lokho wukuthi, abazami nje ukweba i-akhawunti yethu ye-Amazon, kepha futhi, bafuna nemininingwane yethu yekhadi lesikweletu.
Uma sesifake imininingwane ye-akhawunti yethu ye-Amazon, ukuphela kwento esiyizuzile nikeza abakwa-scammers ukufinyelela ngakho-ke kufanele singene ngokushesha ku-akhawunti yethu ye-Amazon futhi siguqule iphasiwedi.
Ukudlula ukuphepha kwesiphequluli
Lapho sesibe ngabaphumelele ngenhlanhla ye-iPhone XS ngewebhu ngaphandle kwe-https protocol, uqondiswa kabusha ngokuzenzakalela kukheli lewebhu elisebenzisa umthetho olandelwayo we-https, umthetho olandelwayo njengoba, njengoba siphawulile ekuqaleni kwendatshana ibhala ngemfihlo yonke imininingwane ethunyelwe, ngakho-ke akekho umxhumanisi ongaba nokufinyelela ongakususa ukubethela.
Kulokhu, akekho umxhumanisi ongakwazi ukufinyelela, ngoba esikwenzayo uma sifaka imininingwane ye-akhawunti yethu ye-Amazon nekhadi lesikweletu esikwenzayo ukuyinikeza ngqoNgakho-ke, iziphequluli azikwazi ukubona ukuthi iyiwebhusayithi yobugebengu bokweba imininingwane ebucayi futhi azisazisi ngayo.
Ngaphezu kokuzama ukukhohlisa abasebenzisi abaqaphe kakhulu, lapho bethola imininingwane yesitifiketi sokuphepha, sibona ukuthi kanjani Kube yi-Amazon uqobo eqinisekise ubunikazi bewebhu.
Yize kuyiqiniso ukuthi i-Amazon ingenye yezinkampani ezisetshenziswa kakhulu ukusingathwa kwamafu emhlabeni yizinkampani nge-AWS, akujwayele ukunikezelwa ekuqinisekiseni ukuphepha kwamakhasi ewebhu, yize futhi ikwenza lokho ngezinga elincane, njengewebhu enikeza ukufinyelela kwinsizakalo yayo yokusakaza ividiyo ye-Primevideo.
Isitifiketi sokuphepha seprothokholi yeAmazon.com ne-Amazon.com https isayinwe ngabakwaDigicert Inc. lokho kufanele ifane wewebhu lapho kucelwa khona imininingwane ye-akhawunti yethu ye-Amazon kanye nekhadi lethu lesikweletu.
Leyo ekuTwitch.tv, isevisi yokusakazwa kwesidlali sevidiyo nayo eyingxenye ye-Amazon, isayinwe yiGlobalSing nv-sa. Lezi zinkampani ezimbili yizona ezisetshenziswa kakhulu emhlabeni ukuthola izitifiketi ezidingekayo ukuze zikwazi nikeza ukuphepha okudingekayo nsuku zonke lapho upheqa i-inthanethi.
Akekho onikeza noma yini
Ayikho inkampani, ingasaphathwa eyemikhulu kunayo yonke, ebaluleke kangaka ekunikezeni lutho. Akekho opha noma yini, yize kuyisisho ukuthi wonke umuntu kufanele azi, Kubukeka kungakholeki ukuthi namuhla, baningi abasebenzisi abakholelwa kulolu hlobo lwemikhonyovu, imikhonyovu evamise ukuvela ku-Facebook naku-WhatsApp, futhi esanda kuqala ukutholakala nge-SMS.
Lolu hlobo lobugebengu bokweba imininingwane ebucayi lufana nalolo oluqale nokusabalala emasontweni adlule nge-SMS evela ePosini, lapho besazisa khona ukuthi banephasela lethu nokuthi kufanele sikhokhe izindleko zokuthumela kuphela, ngendlela abafuna ngayo ukuthola inombolo yethu yekhadi lesikweletu ngokulandela inqubo efana kakhulu naleyo esikhulume ngayo kulesi sihloko.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Amazon » Umkhankaso omusha wobugebengu bokweba imininingwane ebucayi nge-SMS ezenza ubuwena be-Amazon
I-Facebok Pay: uhlelo lokukhokha lweselula lwe-WhatsApp ne-Instagram